Nahoana ny "Bait and Switch" no mampidi-doza kokoa noho ny tsara - Fanehoan-kevitra avy amin'ny manam-pahaizana manokana momba an'i Semalt, Natalia Khachaturyan
Ny tetikady tetik'ady Semalt , Natalia Khachaturyan, dia nilaza fa efa naharitra ela ny teknolojia fampiroboroboana sy ny fifanakalozana ary efa niasa taona maro lasa izay. Saingy amin'izao fotoana izao, tena tsy mendrika izany. Ireo mpanjifany dia avo roa heny amin'izao fotoana izao raha toa ka efa zatra izy ireo ary ny gado toy izany dia tsy mahomby intsony raha toa ka efa zatra izy ireo.
Ny fomba fiasa "Bait and Switch"
Mba hanazava fotsiny, ny fanakambanana sy ny fifandimbiasana dia ny fanaovana dokam-barotra amin'ny famoahana vokatra iray tsy misy firavaka, ary rehefa atao ny lamandy, fa tsy manatanteraka ny baiko, dia hiezaka hivarotra vokatra mitovy matetika ianao amin'ny vidiny. Izany dia midika fa ny mpanjifa dia "ampiasaina" miaraka amin'ny vokatra mora vidiana ary rehefa ao amin'ny magazay izy ireo, ny mpivarotra amin'izao fotoana dia miezaka ny "manidy" ny vokatra ho an'ny iray hafa amin'ny vidiny ambony.
Ny hevitra dia diso sy tsy mendrika, indrindra amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa - chevron jersey stoff. Na izany aza, mety ho tsara amin'ny mpizaka vola izany. Izany no antony iantsoana ny dokam-barotra diso. Mazava ho azy, maro ireo tompona fandraharahana madinika no manao an'izany tsy mahalala izany, fa ny hafa kosa manao izany amin'ny tanjona.
Mba hisorohana ny fahasarotana amin'ny fitaka ataon'ity fametahana ity, ny mpivarotra sasany dia mametraka fanambarana amin'ny farany ambany amin'ny dokambarotra fa voafetra ihany ny isan'ny vokatra. Amin'izany fomba izany, miezaka ny mitazona ny lamosiny izy ireo ary mampiseho fa tsy misy afa-tsy ny vokatra manokana izy ireo taorian'ny famoahana ilay dokambarotra ary manandrana manolotra izay azony.
Ny trosa iray hafa mpividy entana dia afaka ampiasaina amin'ny fialana amin'ny dokam-barotra diso dia ny fananana ny dokam-barotra voafantina an-tsompitra nefa mbola miezaka manao ny fiatoana aloha..
Na dia tsy misy ratsy aza ny manintona na "mpanjifa" mpanjifa, dia ny fametrahana ny zavatra nambaran'izy ireo no tena olana. Fomba hafa mitovy amin'izany koa ny atao hoe "manendre ary manome." Eto, ny orinasa dia mangataka ny adiresy mailaka mpanjifa alohan'ny hivarotana ny vokatra nangatahana. Tsy misy maharatsy an'io fomba fiasa io satria tsy voaverina ny vokatra. Ny adiresy mailaka dia tsy diso. Araka ny voalaza terỳ aloha, ny hany olana dia miova.
Fitaovana mahazatra sy fanakanana ny loza ara-barotra
Tsy ny orinasa rehetra manao fanatanjahan-tena sy manidy no manao izany. Ny sasany tamin'izy ireo dia nanao fahadisoana toy izany. Ireto ny sasany amin'ireo teknikam-pomba iraisan'izy ireo:
Manintona ny fifamoivoizana amin'ny vokatrao amin'ny fampiasana ny mpifaninana iray
Izany dia mitranga rehefa mamaritra ny vokatrao toy ny vokatra avy amin'ny mpifaninana ianao. Izany dia hampifangaro ny mpanjifa mba hanindry ny rohy hiheverana fa vokatra hafa izany. Ohatra, raha ny marika famantarana ny solosaina findainao dia Hughes Paul ary ianao dia mamaritra azy ireo ho HP laptops, ny mpanjifa dia hanadino azy ireo ho an'ny finday malaza Hewlett Packard ary tsindrio ny rohy.
Ampiasao ny teny fototra tsy misy ifandraisany na tsy misy adihevitra momba ny SEO sy ny famaranana
Mba hahafahana mametraka avo be mora, ny mpivarotra sasany dia mampiasa teny hevi-teny izay tsy misy dikany amin'ny orinasany, satria tsy misy fifaninanana firy amin'ny teny fanalahidy. Ireo mpividy ireo dia liana amin'ny fanehoana.
Tsy maintsy takatrao fa raha mbola ambony noho izay irinao ianao, dia tsy hivadika ho anao izany. Tsy ianao ve no manao raharaham-barotra? Eritrereto izao, raha mivarotra solosaina ianao ary mampiasa ny teny fototra mifandraika amin'ny lohatenin'ny SEO, ireo olona te hividy ny fanontam-pirinty dia tsy maintsy manindry ny rohy ary mitsidika ny tranonkalanao, saingy tsy manao lamandy izy ireo satria tsy mivarotra printy !!!
Fantatrao ve fa voampanga amin'ny klioba rehetra ny dokam-barotra an-tserasera na mivadika amin'ny fivarotana sa tsia? Ity teknika lafo ity dia antsoina hoe tetikady mainty amin'ny teny SEO. Miaraka amin'ireto teknika ireto, dia miasa amin'ny "trafika 100% & 0% varotra" ianao.